Real wemunda Ini Anundgård, Holm - "Old Affär'n" | Holmbygden.se
Tinokutambira Holm varidzi itsva!
A dzakanyorwa storied pfuma Holm, 400M Church, iyo kare chaimbova reruwa kuti chitoro - colloquially anozivikanwa se "Old Affär'n". The pfuma "Anundgård 3:13"Ane pasi nharaunda 2350 M2 pamwe kupaka zvivako zvakanaka.
imba Original (miganhu 215 M2 pamwe bhesimendi uye 2 nhanho) akavaka 1911 pokugara zvebhizimisi pasi pasi uye dzokugara imba yepamusoro. Kuma1990, imba chakagadziriswa zvizere uye zvakawedzerwa 2 ndege akavaka (miganhu 75 m2) kuti nzvimbo kambani kombiyuta.
Living kwaigara imba yepamusoro 210 M2. Roof chinjiri ne nyanza maonero. Ari pamusoro dzokugara dziri mahofisi ano nomudonzvo kamuri kicheni uye chimbuzi. High-nokukurumidza Internet (faibha). Kuwedzerwa sutterängvåning furati pasi pauriri. Vanoverengeka kallförrråd uye nharo garaji. Waini uye mbatatisi dura 1911 mu Housing.